अब तपाईंको कम्प्युटरले त्यही बोल्छ जुन तपाईंले लेख्नुहुन्छ।
आज मैले तपाईंहरुलाई एउटा यस्तो अचम्मको ट्रिक्क लेख्न गइेरहेको छु जुन कि तपाईंले जे लेख्नु भयो तपाईंको कम्प्युटरले त्यही बोल्छ। यो ट्रिक्क सबै microsoft operating system मा काम गर्छ। यसको लागि तपाईं ले केही step हरु follow गर्नुहोस सफ्टवयर आफ्फै बन्नेछ। यदी तपाईंले यो सफ्टवयर तपाईंले आफ्नो साथीहरुलाई देखाउनु भयो भने तिनीहरु तपाईं सग impressed हुनेछन।यस्को लागि तपाईंले तलको step हरु follow गर्नुहोस्।
1. सुरुमा आफ्नो Notepad खोल्नुहोस् र तल दिएको कोड् कपि गरेर पेस्ट गर्नुहोस्।
2. अब यो नाम speak.vbs राखेर फाइल डेस्कटप मा save गरिदिनुहोस्।
3. अब डेस्कटपमा गएर speak.vbs लाई dubbele क्लिक गर्नुहोस् र बक्स भित्र तपाईं आफ्नो कम्प्युटरले जे बोलोस भन्न चाहनुहुन्छ त्यही लेख्नुहोस्।
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 2:28 PM
Nice its really work
copy nai hudai na